Indlwana yonke enendawo enhle yokungcebeleka - I-Airbnb
Indlwana yonke enendawo enhle yokungcebeleka
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Paula
U-Paula Ungumbungazi ovelele
Indlu yomndeni emafulethini anezikhala, enakho konke ukunethezeka nokuphepha. Kutholakala ehoreni elingu-1 uhamba ngemoto usuka e-Florianopolis, indawo enhle yokuzijabulisa nomndeni nezingane. Ukufinyelela kuzo zonke izindawo zamafulethi eziluhlaza, ukuxhumana nezilwane, i-Wi-Fi yamahhala, ukushisa kwegesi okuphakathi, i-jacuzzi yangaphakathi engasetshenziswa ngisho namazinga okushisa aphansi ngoba isendaweni yangaphakathi endlini, exhunywe ngokuqondile egumbini lokuphumula nendawo yokungcebeleka. Indawo evulekile yokujabulela umzuzu ngazo zonke izinto ezilula.
Indawo enobumnandi enakho konke, ilungele labo abathanda ukupheka zonke izinhlobo zokudla. Indawo yomlilo, uhhavini nesitofu sezinkuni kugcina ngayinye ifudumele ngokugcwele ngisho namazinga okushisa aphansi kakhulu. Ubhavu (i-jacuzzi) wabantu abangaba ngu-10 uyindawo ekhethekile futhi uzobe ulinde izivakashi sezivele zigcwele futhi zifudumele.
Emadolobheni ase-São Pedro de Alcantara nase-Angina uzothola isakhiwo sezitolo ezinkulu namakhemisi asebenza phakathi namahora ebhizinisi, kodwa vala phakathi kwamahora angu-12 no-14 ngesikhathi sesidlo sasemini
Sikhona ukuze sikusize noma nini lapho isivakashi sidinga usizo. Sishiya indlu ilahlekile ngokuphelele futhi ikhethekile ezivakashini kodwa uma kunesidingo vele usishayele ucingo.
UPaula Ungumbungazi ovelele